BWC089B - OMG 16 Fotoam-pahavaratra maivana ho an'ny fakan-tsarimihetsika vatan'ny polisy (Angla 170 degre) - OMG Solutions
- fandraketana 40MP.
- Volavola marani-tsaina, 128g ihany.
- Namboarina tamin'ny bateria 4000mAH - fandraisam-peo 16 ora.
- Tohano ny fakan-tsary mini ivelany, tena 720P. (Safidy)
- Tohano ny famonoana ny feon'ny maodim-peo, ny horonantsary firaketana tsy misy feo, atodiho, ny video misy feo.
- Fandraisana feo miafina, tsy misy feo ary tsy misy jiro famantarana rehefa miasa fakan-tsary.
- Fiasan'ny fahitana matanjaka amin'ny alina, afaka mahita ny fisehoan'ny olona mazava hatramin'ny 15M ao anaty haizina tanteraka.
- bokotra miloko raha bokotra "power on / off".
- Ny fidinana amina tobin-tsolika dia mora amin'ny famandrihana.
- Lahatsary manan-danja nanamarika sy niasa mihidy.
- Fampandrenesana feo sy tselatra.
- fandraisam-peo bokotra iray, fandraketana tadivavarana, asan'ny detection Motion, aza hadino ny sarin'ny fampiharana lalàna.
- Fandraisana feo miafina, tsy misy feo sy jiro famantarana rehefa miasa fakan-tsary.
- Mandrosoa haingana ary avereno ny 1-128X.
- Ny asan'ny superimposition ny endri-tsoratra, ny horonan-tsary sy ny sary rehetra dia hapetaka miaraka amin'ny fotoana, ID fitaovana, polisy ID ary fampahalalana hafa, tsy afaka amboarina na amboarina izy ireo, manome porofo ara-dalàna mahomby kokoa.
- Fandraketana mialoha ny horonantsary, ny fandraisam-peo efa ela, aza hadino ny sarin'ny fampiharana lalàna.
- Fandraisana andraikitra lehibe, dia ny fandraisam-peo, ny fakana sary 、 fandraisam-peo.
- Milalaova feo, horonan-tsary ary sary eo amin'ny sehatra
- Ny angona horonan-tsary dia hozaraina sy ho voatahiry ho azy, isaky ny safidy 5/10/15/20 minitra, hisorohana ny fahaverezan'ny data vokatry ny fandidiana diso.
- Miasa / mamono ny feon-tsary, rehefa vonoy ny feo, tsy misy feo ilay horonantsary fandraisam-peo.
- Switcher sivana indroa, tsy misy loko miloko amin'ny antoandro, mazava kokoa amin'ny alina.
- Tsy afaka mijery na mamafa ny angon-drakitra fandraketana rakitra, raha tsy nahazo alalana.
- Miaraka amin'ny clip fihodinana 2pcs.
- Fampiasana anti-shake, manohana anao haka sary mazava kokoa.
- Tsy tantera-drano: IP67
- Ampifandraiso mivantana ny PC, fiarovana ny teny miafina.
- Natsangana tamin'ny WIFI (safidy)
- Natsangana tamin'ny GPS (safidy)
Video Fanapahan-kevitra: 4K 30P, 3.2K 30P, 2304 * 1296P 30P; 1920 * 1080P 30P, 1280 * 720 60P, 1280 * 720 30P, 848 * 480 30P
Horonan-tsary: H.264 MPEG4
Audio: Miorina tsara ao amin'ny mikrôfo.
Format Audio: AAC2./MP3
Water Mark: ID ID, Fotoana sy daty nametahana ilay horonan-tsary.
Camera: Safidy fakantsary 40Mega pikantsary miaraka amin'ny tifitra azo atao (3/5 / 10photos)
Sary: 4M(2688*1512 16:9), 8M（3226*1814 16:9）, 12M（4838*2722 16:9）,
Haavo fitehirizana: Mpampita sary
Language: Anglisy / rosiana / poloney / sinoa
Midira / mivoaka: 1-128X
Rakitsoratra bokotra iray: Support
Fitantarana momba ny môtô: Support
Jiro IR: 2 hazavana IR
Jiro manampy: Amin'ny jiro fotsy iray, mahazoa fanairana
Lahatsary TOROHALINA / IMAGE
LCD Screen: Fampisehoana miloko TFT-LCD 2 santimetatra
Firaketana an-tsoratra: Wide Angle 170 degrees
Night Vision: Hatramin'ny metaly 10 miaraka amin'ny fitazomana hita maso
Clip: Sokajy avo kalitao miaraka amin'ny fihodinana 360 degre
Type: Ny bateria Bithium Lithium 4000mAH naorina
Fiatrehana ora: 300 minitra
Fanamarihana mitohy: 16 Hours
Fampitandremana ambany: Beep Alert sy mpitsoka fanairana
Fiarovana ny tenimiafina: Ny hametraka tenimiafina mpandrindra hanafaka ny famafana. Tsy afaka mijery ireo horonantsary fotsiny ny mpampiasa fa tsy afaka mamafa izany.
Pre-record & Post-record: 5 ~ 10 segondra mialoha-rakitra / post-record
Vaky: 3/5/10 Nalaina sary
lafiny: 78 mm * 59 mm * 27mm
Tetikasa miasa: -30 ~ 60 degre Celsius
Toby fandrefesana: -30 ~ 55 degre Celsius